गुटको राजनीति अन्त्य गर्न आफू देश दौडाहामा निस्केको शेखर कोइरालाले भनाइ - News Birat
गुटको राजनीति अन्त्य गर्न आफू देश दौडाहामा निस्केको शेखर कोइरालाले भनाइ
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले गुटको राजनीति अन्त्य गर्न आफू देश दौडाहामा रहेको बताएका छन् ।नेपाली कांग्रेस तरुण विभाग मोरङले बुधबार विराटनगरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले कांग्रेसभित्रको गुटको अन्त्य गर्न आफूले देश दौडाहा गरिरहेको बताए । उनले कांग्रेसभित्र गुट रहने हो भने त्यसले कांग्रेसलाई नै समाप्त पार्ने र लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने बताए। उनले पार्टी्भित्र आन्तरिक द्वन्द्व कायमै रहेको पनि बताएका थिए।
उनले कांग्रेसमा अब गुट नभई बिचारको राजनीति आवश्यक रहेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. डिला संग्रौलाले गुटको अन्त्यको सुरुवात मोरङबाट नै गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा मोरङ कांग्रेसका सभापति डिकबहादुर लिम्बुले गुटको राजनीति अन्त्य हुन नसके कांग्रेस नै समाप्त भएर जाने बताए । कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले तरुण युवाहरुलाई नेतृत्व दिन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा ५० जना युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।
बुधबार, ४ भाद्र २०७६, २२:०१ August 21, 2019 मा प्रकाशित